USteve Jobs: Gxila, umbono, idizayini | Martech Zone
USteve Jobs: Gxila, umbono, idizayini
NgeSonto, uDisemba 18, i-2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ku-podcast yangoLwesihlanu sixoxe ngezincwadi ezinhle kakhulu esizifunde kulo nyaka futhi, kude kakhulu, engangiyithanda kakhulu Steve Jobs. Bengingafundi kakhulu muva nje - ngiyabonga kakhulu UJenn ngokuthenga le ncwadi kimi!
Le ncwadi akuyona into ethandwayo yemisebenzi. Eqinisweni, ngicabanga ukuthi kukhokha isithombe esilinganiselayo lapho ukuphazamiseka kweMisebenzi kwakuyizinkinga zakhe zokulawulwa kobushiqela. Ngithi ngomashiqela ngoba umthelela owaba nawo empilweni yakhe, emndenini wakhe, kubangani bakhe, kubasebenzi bakhe nakwibhizinisi lakhe. Abantu abaningi babheka i-Apple ngokwesaba… njengenye yezinkampani ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Kodwa-ke, kwakukhona ukungahambi kahle… I-Apple yake yabusa njengomholi embonini ye-PC yabe isilahlekile.
Kwanele kokungekuhle… Imisebenzi ngempela ibingumuntu oyingqayizivele. Ukugxila kwakhe kwe-laser nombono, kuhlanganiswe nokunambitheka kwakhe okungagudluki ekwakhiweni kwenze inkampani yakhe yahluka. Imisebenzi iguqule imboni yamakhompyutha wedeskithophu, imboni yokuphrinta ideskithophu, imboni yomculo, imboni yama-animated yama-movie, imboni yezingcingo manje imboni yethebhulethi. Kwakungekhona ukuklama nje, empeleni waguqula indlela lawo mabhizinisi asebenza ngayo empeleni.
Bengingomunye wabagxeki ngenkathi i-Apple ithi ivula izitolo ezidayisa ezitolo. Bengicabanga ukuthi ngamantongomane… ikakhulukazi njengoba iGateway ibivala awabo. Kepha engingakuqondanga ukuthi izitolo ezidayisa ezitolo bezingaqondene nokuthengisa umkhiqizo, bezimayelana nokwethula imikhiqizo ngendlela Imisebenzi efuna iboniswe ngayo. Uma ungazange uye esitolo se-Apple, kufanele usihlole. Noma uvakashela i-Best Buy, uzobona ukuthi i-Apple yethulwa kanjani ngokuhlukile.
UWalter Isaacson ungumxoxi wezindaba omangalisayo futhi nganginamathele encwadini ngokushesha nje lapho ngiyivula. Kwakukhona i-caricature yemisebenzi esiyibonile sonke, kepha incwadi yayinemininingwane eminingi kakhulu ngokuxoxisana nabantu ababesekamelweni elilodwa. Akukhona ukuthi le ncwadi ayinasici, noma kunjalo. IForbes isanda kushicilela okuhlukile kakhulu indaba ngomkhankaso we-Think Different.
Ngokwami, umyalezo engihambe nawo kusuka encwadini ukuthi impumelelo ikhona ongayithola uma ungapheli amandla ekuphishekeleni umbono wakho. Ngibona sengathi ibhizinisi lethu liphumelela njengokuzinikela kwethu ekuletheni izinsizakalo ezinhle kumakhasimende ethu. Angiqiniseki nje ukuthi ngizimisele ukudela okuningi njengoJob ukuze ngithole lapho. Ngomqondo othile, kungenzeka ukuthi unqobe izimpi eziningi, kepha anginasiqiniseko sokuthi uyinqobile le mpi.
Ngingathanda ukuzwa imicabango yakho encwadini!
Tags: imisebenzi ye-steve
Ukubeka uphawu kwe-Avatar: Kuyabanda noma kuyakha?
Yini i-PROskore Yakho?